I-China, izwe lamabhuloho okuqopha | Izindaba Zokuhamba
Maria | | Yini ongayibona, Ukuhamba kwe-Asia
Ukunambitheka kokwakhiwa kwemega eChina kuyaziwa, ikakhulukazi kusuka esikhathini kuya kule ngxenye. Inhloso akukhona nje ukukhombisa amandla wobunjiniyela baseChina kepha ukwakha izinhlaka ezifanele ukuba yizindawo eziningi zokuheha izivakashi, njenge-Eiffel Tower eParis noma iParthenon e-Athens.
Ukwakhiwa kwemega kokugcina okuzalelwe ezweni lase-Asia yibhuloho iBeipanjiang elibizwa ngegama "eliphakeme kakhulu emhlabeni." Njengoba ingamamitha angu-565 ukuphakama, lesi sakhiwo sidlula isithiyo esiphakeme samamitha angama-500 elinye ibhuloho elibizwa ngeSidu, nalo eliseChina, esaliphawule ngo-2009.
Kuze kube yileso sikhathi, uSidu ubemele ukunqoba okukhulu kwezakhiwo ezinkulu ezweni ngaphakathi kwesigaba samabhuloho, futhi kusukela ngo-2003 babezimisele ngokuhlwitha irekhodi elaliphethwe yiRoyal George yaseColorado e-United States kuze kuqale ikhulu lama-XNUMX .
Uma okuthile kugcwele eChina, kungukwakhiwa kwemega, yingakho senza ukubuyekeza okufushane ngamamitha amaningana ahlaba umxhwele ukusuka emhlabathini.
1 Ibhuloho laseBaipanjiang
2 IZhangjiajie Glass Bridge
3 Qingdao Water Ibhuloho
4 IBeipanjiang Railway Bridge
5 IKarakorum, umgwaqo omkhulu kakhulu
IBeipanjiang Bridge ayibafanele labo abane-phobia yezindawo eziphakeme. Itholakala ngamamitha angu-565 phezulu ngenhla komfula iNizhu, eningizimu yezwe, futhi ixhuma izifundazwe zaseYunnam naseGuizhou. Ingamamitha angu-1.341 ubude futhi izoxhuma amadolobha ayekade ehamba amahora amahlanu ngemoto ngamahora amabili.
Izithombe ezingathathwa zizungeze iBhuloho iBeipanjiang ziyamangalisa. Inkungu ephakathi kwezintaba isakazekela kuwo wonke umhlaba sengathi ifuna ukumboza ibhuloho elisanda kuvela phakathi kwamatshe.
IZhangjiajie Glass Bridge
Le mega-ujenzi isendaweni ephakeme kunaleyo eyedlule, kepha umphumela uyamangalisa njengoba ingilazi yayo ivumela umuntu akholelwe ukuthi uhamba emoyeni.
IZhangjiajie yibhuloho lengilazi elide kunawo wonke emhlabeni njengoba lingamamitha angu-430 ubude namamitha angama-300 ukuphakama. Itholakala ngaphakathi kweZhangjiajie Natural Park, esifundazweni saseHunan, esaziwa njengeNdawo Yamagugu Omhlaba yi-UNESCO kusukela ngonyaka we-1992, esingesinye sezivakashelwa kakhulu eChina.
Leli bhuloho lengilazi libize ama-dollar ayizigidi eziyizinkulungwane ezingu-3.400, okuyisibalo esidina njengokuphakama kwalo Lapho izinkinga ze-vertigo sezinqotshiwe, kungcono ukuthatha isithombe silele kwelinye lamapuleti engilazi asenzayo. Umphumela uthusa kakhulu.
Qingdao Water Ibhuloho
Akunasici esiphikisana nobunjiniyela baseChina. Namanzi kusukela lapho phezu kweJiaozhou Bay, ibhuloho elide kunawo wonke phezu komhlaba emhlabeni lakhiwa ngo-2011. Le mega-ujenzi inobude bamakhilomitha angama-42,5 futhi inemizila eyisithupha lapho kuzungeza khona umgwaqo kuzo zombili izinhlangothi. Inamapyloni angaphezu kwama-5.200 futhi ukwenziwa kwayo kudinga izigidi zamathani wensimbi nokhonkolo.
Ukwakhiwa kwalo kuthathe irekhodi lasuka kwelinye ibhuloho laseChina, lelo eliseHangzhou Bay okuthi kuze kube manje libhekwe njengelide kunawo wonke emhlabeni phezu kolwandle, elinamakhilomitha angama-36 ubude.
Njengamanje, isiqhingi esincane esakhiwe sakhiwa eduze kweQingdao Bridge ukuze sisebenze njengendawo yokuphumula yabahambi., ukuze bakwazi ukufaka uphethiloli ezimotweni zabo, badle okulula noma bathenge.
IBeipanjiang Railway Bridge
Isithombe nge-Rail Travel
Leli bhuloho liphethe isihloko sebhuloho lesitimela eliphakeme kakhulu emhlabeni. Itholakala eLiupanshui futhi yavulwa ngo-2001. Ngo-2009 yalahlekelwa isihloko sayo sebhuloho lamakhothamo eliphakeme kunawo wonke emhlabeni kodwa isagcina lokhu okushiwo ngenhla.
Kufanele kukhulunywe ngokukhethekile ngendlela elandelwe ukwakhiwa kwayo, echazwe njengobuhlakani obukhulu. Isizathu ukuthi esikhundleni sokusebenzisa imibhoshongo emibili yesikhashana entweni ngayinye yokwakha i-arch, yenziwa ngama-halves amabili emsebenzini wamanga, ngamunye ngakolunye uhlangothi lomhosha. Inqwaba yokuqala ekugcineni ngakunye yayisebenza njengenduku yokubopha.
Lapho amahafu wamakhothali eseqediwe, izinqwaba zazungeziswa ngo-180º zaze zabhekana nemengamo. Kwabe sekuhlanganiswa izingcezu zemengamo kanye nezinye izinqwaba kanye nedeski zakhiwa.
IKarakorum, umgwaqo omkhulu kakhulu
Akusilo ibhuloho kepha ukuqedela ezindaweni eziphakeme sizokhuluma ngeKarakorum. Umgwaqo omkhulu ongamamitha ayi-5.000 XNUMX oxhumanisa isentshonalanga yeChina nenyakatho yePakistan ngokusebenzisa enye yezindawo ezimangele kakhulu neziyingozi emhlabeni njengoba ihamba ezinhla ezintathu zezintaba ezinkulu ezinjengebanga lePamir, iHimalaya kanye nohla lweKarakorum.
Njengokulangazelela, umzila ogudle umgwaqo omkhulu weKarakorum wake waba yingxenye yoMgwaqo iSilika futhi namuhla kuthathwa njengophawu lobungani nokubambisana phakathi kweChina nePakistan.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Ukuhamba kwe-Asia » I-China, izwe lamabhuloho okuqopha umlando
Izinsuku ezine eDubai, ukunethezeka nokuzijabulisa